खुट्टा सुन्निनुको छ यस्ता कारण, एक पटक पढ्नै पर्ने - ज्ञानविज्ञान
खुट्टा सुन्निनुको छ यस्ता कारण, एक पटक पढ्नै पर्ने
एउटा खुट्टा सुन्निए पछि के गर्ने ?
सामान्यतया दुइटै खुट्टा सुन्निछ, तर कहिलेकाँहि एउटा खुट्टा कम सुन्निएको हुनसक्छ । विशेष गरेर जतातिर फर्केर सुतिन्छ, उतातिरको खुट्टा बढी सुन्निछ । एउटा खुट्टामात्रै सुन्निएको छ भने तुरुन्तै कारण पत्ता लगाउनु पर्छ । खुट्टाको रक्तनलीमा समस्या भएमा एउटा मात्रै खुट्टा सुन्निन सक्छ । यसलाई डीप भेन थ्रोम्बोसिस भनिन्छ । रक्तनलीमा रगत जमेर रक्त सञ्चालन नभएर एउटा मात्रै खुट्टा सुन्निन सक्छ ।
खुट्टा सुन्निनु एउटा साधारण समस्या हो । यसको कारण अति सरलदेखि अत्यन्तै जटिलसम्म हुन सक्छ । त्यसैले खुट्टा सुन्निएको छ भने, तुरुन्तै कारणको बारेमा जाँच गर्नुपर्छ । खुट्टाको हड्डी वा गोलीगाँठो भन्दा माथि औंलाले थिच्दा सुन्निएको भए खाल्डो देखिन्छ । औलाको टुप्पाले ३० सेकेण्ड जति खुट्टामा थिच्दा सुन्निएको छ भने थाहा हुन्छ । सुन्निएको कारणले हातको औलामा औंठी लगाउन गारो हुन सक्छ । जुत्ता लगाउँदा गारो हुने, हिड्दा खुट्टा दुख्ने वा अप्ठ्यारो हुने आदिखुट्टा सुन्निएको कारणले हुन सक्छ ।
खुट्टा सुन्निने के के कारण हुन सक्छन् ?
खुट्टा सुन्निने धेरै कारणहरु मध्ये मुटु, मृगौला र फोक्सोका रोगहरु प्रमुख हुन् । मधुमेह, उच्च रक्तचाप र थाइराइडको कमी पनि प्रमुख कारणहरु हुन् । त्यसमध्ये पनि मुटु र मृगौला सम्बन्धी कारणहरु सबभन्दा जटिल मानिन्छन् । यसको लागि तुरुन्तै आवश्यक जाँच गर्दा राम्रो हुन्छ ।
कहिले काहिँखुट्टा सुन्निने सामान्य कारण पनि हुनसक्छ । जस्तैः मोटोपना, गर्भावस्था, दैनिक धेरै समयसम्म उभिनुपर्ने वा एउटै स्थानमा धेरै बेरसम्म बस्नु पर्ने जस्तैः सवारी चालक र गार्ड आदि । यसको लागि पीर गर्नु पर्दैन । यस्तो अवस्थामा कुनै उपचारको जरुरी हुर्दैन । औषधीको कारणले पनि खुट्टा सुन्निन सक्छ । मोटोपना पनि खुट्टा सुन्निनेको प्रमुख कारणहरु हुन् । यदि औषधिका कारणले सुन्निएको हो भने औषधी परिवर्तन गरेको १–२ हप्तामा घट्छ ।
मुटु वा मृगौलाको कारणले सुन्निएको कसरी थाहा पाउने ?
मृगौलाको कारणले सुन्निएको हो भने बिहान उठ्ने बेलादेखि नै अनुहार सुन्निएको हुन्छ र दिन बित्दै जाँदा सुन्निएको घट्न थाल्छ । मृगौलाको कारणले अनुहारमा बढी र खुट्टामा कम असर पर्दछ । तर जटिल अवस्थामा खुट्टामा पनि बढी असर देखिन्छ । मुटुको कारणले खुट्टामा बढी र अनुहारमा कम सुन्निएको हुन्छ । बिहानमा कम र साँझ बढी सुन्निएको देखिन्छ । खुट्टा सँगसँगै हात, आँखाको वरिपरि वा अनुहार पनि सुन्नियो भने केही न केही समस्या हुने सम्भावना बढी हुन्छ । तर मुटुको कारण ले हो भने, मुटुको जाँच गरेपछि यो कुराको टुङ्गो लाग्छ । त्यसको लागि छातीको एक्सरे, इ.सी.जी र इकोकार्डियोग्राफी गर्नु जरुरी हुन्छ ।
खुट्टामा सुन्न्निएको कम गर्न अरु के गर्न सकिन्छ ?
गुरुत्वाकर्षणको कारणले खुट्टाको रक्तनलीमा दबाब हुन्छ । त्यसैले खुट्टामा सुन्निने संभावना बढी हुन्छ । तसर्थ सकेसम्म बस्ने बेलामा खुट्टालाई टेबुलमा राख्ने र सुत्ने बेलामा एउटा खुुट्टालाई सिरानीको माथि राख्नु राम्रो हुन्छ । यसबाट खुट्टा सुन्निएको कम हुन्छ ।
खुट्टा सुन्नियो भने कसलाई जँचाउने ?
खुट्टा सुन्निएमा तुरुन्तै आत्तिनु हँदैन खुट्टा मात्रै सुन्निनु र अरु केही लक्षण (जस्तै स्वाँस्वाँ, छाती दुख्नु, पेट पोल्नु, पिसाब कम हुनु) नहुनुलाई जटिल समस्याको रुपमा मानिदैन । तर, माथि लेखेको कुनै समस्या पनि खुट्टा सुन्निने सँगै छ भने तुरुन्त मेडिकल परामर्श लिनुपर्छ । यसमा धेरै जसो बिरामीको मुटुको परिक्षण गर्नुपर्ने भएकाले मुटुरोग विशेषज्ञलाई भेट्नुपर्ने जरुरी हुन्छ । मृगौलाको कारणले पनि खुट्टा सुन्निने गर्दछ । प्रारम्भिक जाँचमै (पिसाब र मृगौलामा खराबी देखिएमा नेफ्रोलोजिष्ट (मृगौला रोग विशेषज्ञ) लाई भेट्नु जरुरी हुन्छ ।
Topics #खुट्टा #नेफ्रोलोजिष्ट #मुटु #मृगौला #सुन्निनु
Don't Miss it किन हात तथा खुट्टा झुम्म हुन्छ त ? छ यस्तो कारण
Up Next यस्तो अवस्थामा न खानुस केरा, ज्यान जाने सम्भावना – जानी राखौँ
4 hours ago Pradeep Karki
10 hours ago Pradeep Karki
दौडनुका फाइदा यस्ता छन्
दौडिने बानीले सरीरको उर्जाक्षमता पनि बढाउँछ । यसबाट बढि थकान महसुस हुने जस्ता समस्या दूर हुन्छन् । यसले सरीरमा ताजगी…
केही प्राकृतिक उपाय जसको सहयोगबाट मिर्गौलाको पत्थरी हटाउन सकिन्छ
१. निम्बुको रस जैतुनको तेलका साथ निम्बुको रस मिसाएर सेवन गर्नाले मिर्गौलाको स्टोनमा फाइदा पुग्छ । दुख्यो भने ६० मिलि…
कसलाई मन हुदैन र जवान भैरहन , यी हुन् जवान देखिने २० सूत्र
मान्छेका असंख्य चाहनाहरु मध्यै सबै भन्दा पहिलो चाहना हो, जवान देखिनु । चटक्क मिलेको ज्यान र जवान देखिने अवस्था कसलाई…
कसरी आउँछ डण्डिफोर ? डण्डिफोर निचार्नु उचित कि अनुचित ?
कसैलाई पनि आफू कुरुप देख्खिने इच्छा हुँदैन । तरपनि युवायुवतीहरू ऐना अगाडि उभ्भिन्छन् र यत्रो ठूलो डण्डिफोरले उसैलाई एकोहोरो हेरिरहेको…
छाती दुख्दैमा हृदयघात हुँदैन – मुटुमा समस्या भएमा देखिने दुखाई यस्ता छन्
छातीमा सामान्य दुखाई भए पनि हामी हृदयघात पो हुन लाग्यो की भनेर त्रसित हुने गर्छौ । तर, यो बुझाई पूर्ण…
कागतीको बोक्राको फाइदा, यस्ता छन्
१. कोलेस्ट्रोल घटाउँछः यसले कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई घटाउन सहयोग पुर्याउँछ । शरिरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा अत्यधिक हुँदा यसले मुटुलाई स्वस्थ हुनबाट रोक्छ ।…
वियर पिउनुका फाइदाहरु, यस्ता छन्
– वियरले मृगौलामा हुने स्टोनको मात्रालाई पनि कमी ल्याउँछ । – वियरले मष्तिष्कलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ । यसले मानसिक अवस्थालाई…